Isihluzo se-Ac, isihluzo se-Emi, isihluzo soMbane, isihluzo se-Ac Noise-Mengsheng
Iminyaka eyi-14 yamava kwitekhnoloji yokusika i-laser
I-Chengdu Mengsheng Electronics Co., Ltd. yasekwa ngo-2008. Ukususela ekusekweni kwayo, inkampani iye yagxininisa ekuphuhliseni isayensi kunye nobuchwepheshe, ngokusekelwe kudumo kunye nemfezeko, ukugcina uphuhliso oluzinzileyo olulungileyo, yaseka inkqubo engqongqo yolawulo lomgangatho kunye nenkqubo yokulawula.Ukuhlangabezana neemfuno zophuhliso lweemarike, ukwenza isicwangciso sokuthengisa ukubonelela abathengi ngeemveliso ezithembekileyo, ezingabizi kakhulu kunye neenkonzo ezikumgangatho ophezulu, inkampani ibonelela ngombane we-EMI wokwenziwa kohluzo lwengxolo kunye novavanyo lwe-EMC kunye neenkonzo zezisombululo emva kweminyaka eliqela yophuhliso.
Ukususela ekusekweni kwayo, inkampani iye yagxininisa ekuphuhliseni isayensi kunye nobuchwepheshe, ngokusekelwe kudumo kunye nemfezeko, ukugcina uphuhliso oluzinzileyo olulungileyo, iseke inkqubo yokulawula umgangatho ongqongqo kunye nenkqubo yokulawula.
Inkampani izibophelele kuphando kunye nophuhliso lokuhambelana kwe-electromagnetic kunye neteknoloji yokucinezela i-harmonic.Singomnye weefektri ezinokubakho eTshayina.
Zonke iimveliso zethu ezigqityiweyo zihlolwe i-100% kwaye zihanjiswe ngabasebenzi abaqeqeshiweyo bemveliso, abavavanyi kunye nezixhobo zokuvavanya iingcali ukuqinisekisa umgangatho kunye nokuthembeka kwemveliso nganye.
OEM/ODM Manufacturer 3 Phas...
Isihluzi esiLungileyo se-Ac-D...
I-DAA1 iSigaba esinye se-AC 220V E...
DBI5-S Ifayile ye-EMI yeSigaba esinye...
DBI5 Isigaba esinye se-EMI Filte...
I-DAI2 iSigaba esinye se-EMI Filte...
I-DAI1 iSigaba esinye se-EMI Filte...
Indlela eqhelekileyo yoHluzo lwengxolo usebenzisa iMonolit...